Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra. Indro, tsy ho amin’ny tsiron’ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin’ny andon’ny lanitra avy any ambony; 40 Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin’izay andro hahafahanao. Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao.
Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Simeona sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany. Fa hoy kosa Jakoba: Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany. Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin’ny vozonao. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Ary hoy Rahely tamin’i Lea:
Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany.
Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka vaiboly ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty.
Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Andeha isika hankany Dotana. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah.
Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na pvf zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao. Installer sur votre appareil Scannez le code QR et installez cette application directement sur votre appareil Android.
Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy.
Ry Hagara, andevovavin’i Kkatolika, avy taiza ianao? Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy katollka hantsaka ka hilazako hoe: Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa.
Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Dia nahatsiaro Farao, koa indro fa nofy ihany izany.
Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao baibply antitra izao?
TÉLÉCHARGER MICROSOFT ENCARTA 2009 GRATUITEMENT GRATUIT
baiboly katolika malagasy- pdf documents
Avia bwiboly hirahiko hankany aminy ianao. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Téléchargements – 3k. Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin’ny tanin’ny fahoriako. Ary hoy kosa izy: Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny.
Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. Ny Baiboly Masina sacha74 3. Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.
Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny lasakako izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Ny feo dia feon’i Jakoba, fa ny tanana dia tànan’i Esao. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako kato,ika ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina.